We She Me: ၂၀၀၈ မှ ၂၀၀၉ သို့
imaginary clouds no2- 1/1/09, 9:39 PM
အန်ဒီိရေ ပျော်ရွှင်ပါစေ ။
Khaing - 1/1/09, 11:32 PM
Ko Andy & family,
Happy New Year. Hope all ur wish come true in 2009.
War War - 1/2/09, 12:58 AM
Ko Andy yae. Happy New Year. Hope and wish all your wishes come true. :)
တက်တူ - 1/2/09, 2:01 AM
JulyDream - 1/2/09, 2:07 AM
nu-san - 1/2/09, 2:36 AM
WeSheMe မိသားစု နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ..
သားတစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက်နဲ့ ၂၀၀၉ ဆိုရင် အိမ်ရဲ့ ဆည်းလည်းတွေနဲ့ ပျော်နေဦးမှာ မြင်ယောင်နေပါသေးတယ်.. သားသားလည်း တီတီတာတာ စကားပြောတတ်လာမယ်.. မြတ်နိုးလေးအတွက်လည်း ကစားဖော်မောင်လေး ရလာမှာပေါ့.. ကလေးတို့မေမေလည်း အလုပ်အမြန်အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်..
မဇနိ - 1/2/09, 2:59 AM
ပို့စ်အသစ်မတက်တာကြာတော့ ဒီပို့စ်တက်နေတာ မမြင်မိဘူး။
သမီးလေးရယ် သားလေးရယ် အသံသာသာတွေနဲ့ ပျော်စရာပိုကောင်းလာတော့မှာကို အားကျမိပါတယ်။
အစစအဆင်ပြေပြီး ကောင်းခြင်းတွေရောက်ရှိလာမည့် နှစ်သစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Kay - 1/2/09, 4:06 AM
ကိုအန်ဒီတို့မိသားစု နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။ ကိုအန်ဒီလည်း..ဘလော့ ရေးဖို့..အချိန်ထွက်ပါစေ။း)
strike - 1/2/09, 4:26 AM
တယ်ရင်း ၀ှယ်ကမ်းဘက် နော်။၃ရက်နေ့အိမ်ပြောင်းမယ်
၁၃ရက်နောက်ပိုင်းမှ ပိုစ်အသစ်တင်နော် :P
ksanchaung - 1/2/09, 5:45 AM
Happy new year ပါ။ Finance နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားမှန်းသိရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။
Anonymous - 1/2/09, 7:26 AM
Happy New Year to Ko Andy and family!
Anonymous - 1/2/09, 1:25 PM
ဒီမိသားတစု.. ကျန်းမာ၊ချမ်းသာ၊ပျော်ရွှင် သော နှစ်သစ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ...
...ဒီလိုနဲ့ ၂၀၀၈ ဟာ သွက်သွက်လက်လက် ဖျတ်ဖျတ်လတ်လတ် ကုန်သွားတယ်။ ... ကောင်းတယ်ဗျာ၊ ဖုတ်လိုက် ဖုတ်လိုက်နဲ့ ကုန်သွားတာမှမဟုတ်တာကိုး
လွိုင်လင် - 1/2/09, 1:40 PM
ကိုအင်န်ဒီ တို့ မိသားစုအတွက် ပျော်စရာ စိတ်ချမ်းသာစရာ ကောင်းတဲ့ ၂၀၀၉ ဖြစ်နိုင်ပါစေ။
sin dan lar - 1/2/09, 6:44 PM
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ...မနေ့ကတောင် ဆီထမင်းလုပ်နည်း လာဖတ်သွားသေးတယ်။
Anonymous - 1/3/09, 9:32 AM
Anonymous - 1/3/09, 9:35 AM
မင်္ဂလာ ရှိတဲ့ နှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေ ကိုအင်ဒီတို့ မိသားစုရေ..
P.Ti - 1/3/09, 3:35 PM
ကိုအန်ဒီတို့ မိသားတစ်စုလုံး နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပြီး လိုအင်ဆန္ဒတွေလည်း ပြည့်ဝပါစေ... :)
ဘလော့ပို့စ်တွေလည်း များများရေးနိုင်ပါစေ... :P
Anonymous - 1/4/09, 6:37 PM
Happy New Year and Happy Independence Day, Ko Andy
ကိုဇော်လေး - 1/10/09, 7:48 PM
ကိုအင်န်ဒီတို. မိသားစု ကျမ်းမာပျော်ရွှင်ပြီး ၂၀၀၉ နှစ်သစ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ